कोभिडको तेस्रो लहर आए पनि पुरानो मेडिकल कलेज तयारी अवस्थामा छ : डा. मनोहर प्रधान - सुनाखरी न्युज
Posted on: September 27, 2021 - 7:43 pm
सुनाखरी न्युज/ चितवन- कलेज अफ मेडिकल साईन्सेस शिक्षण अस्पताल (पुरानो मेडिकल कलेजका) आवासीय निर्देशक डा. मनोहर प्रधानले कोभिड १९ को तेस्रो लहर आए पनि आफूहरु तयारी अवस्थामा रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो “तेस्रो लहरमा बच्चामा बढी प्रभाव पार्छ कि भन्ने छ । हामी त्यही अनुसार तयरीमा छौं ।”
कोभिडको लक्ष्ण नै नभएका तर पोजेटिभ बिरामी पनि अस्पताल आउने गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो “हामीले कोभिड परीक्षण गरेर कोभिड र ननकोभिड छुट्याएर उपचार गरेका थियौं । यसले अस्पतालबाट अरुलाई फैलिन पाएन् ।”कोभिडको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि समय समयमा अभाव भएको भन्दै डा. प्रधानले अभाव हुँदा काठमाण्डौं र भारतबाट समेत आफैले खरिद गरी ल्याएर बिरामीलाई सेवा दिएको बताउनुभयो ।
अस्पतालको आफ्नै अक्सिजन उद्योग भएका कारण कहिल्यै अक्सिजनको अभाव हुने र बेड नपाउने स्थिति नआएको प्रधानको भनाई छ । “देशका विभिन्न भागमा अक्सिजन र वेड अभाव भईरहँदा पनि चितवनमा यो अवस्था आएन । हामीले अरु अस्पतालहरुलाई समेत अक्सिजन दियौं ।”जिल्लाका मात्रै होइन, काठमाण्डौं लगायत पश्चिम नेपालबाट समेत यहाँ कोभिड उपचारका लागि आएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो “कतिपय हेलिकप्टरमा समेत यहाँ आएर उपचार गरी निको भएर फर्किनु भयो । कोभिडको समयमा चितवनमा जुन खालको उपचार भयो, त्यसले यहाँको उपचार सेवाको विश्वसनीयता बढाएको छ ।”
दोस्रो लहरमा हामी अभ्यस्त भईसकेकोले उपचार गर्न झनै सजिलो हुँदै आएको डा. प्रधानको अनुभव छ । पछिल्लो समय एक गर्भवती महिलामा कोभिड देखिएको उनको सफलतापूर्वक डेलिभरी गराएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ती महिलाको अहिले बच्चा र आमाको स्वास्थ्य राम्रो हुँदै गएको छ । अहिले एक वर्ष मुनिका बच्चामा पनि कोभिड देखिएको डा. प्रधानले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “तेस्रो लहरमा बच्चालाई बढी प्रभावित पार्छ भनिरहँदा कतै त्यस्तो हो कि भन्नेमा पनि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यही सोचका साथ तयारी अवस्थामा पनि छौं ।”
कोरोना अपडेटः ५७४ जनामा संक्रमण पुष्टि, ११ को मृत्यु, ९३२ निको